Ise na-akpata metụtara ụgbọ ala taya mmebi-News Center-NINGBO SUNSOUL ACgbọ ala akụrụngwa CO., LTD
Ihe ise metụtara ihe mebiri taya ụgbọ ala
Oge: 2021-01-25 Hits: 24
Thegbọ ala ahụ chọrọ ịga njem na-enweghị taya, n'ime ụgbọ ala, n'eziokwu, ụfọdụ omume na-emerụkwa taya ahụ, mgbe ụfọdụ ọ nwere ike ime ka ndụ taya ahụ kwụsị.Aga m ekwu maka ụfọdụ agwa na ihe na-emebi ụgbọ ala.
1. Ikpọ ubomisọn̄ moto oro okpon akan, ekpri uwem uwem moto oro edidi, emi ami nnịmde ke kpukpru mme andikpep ẹfiọk.Yabụ ndị nwere ndị enyi enweghị ike ileghara isi okwu a anya, ịnya ụgbọ elu.Ndi nwe ya kwesiri inyocha ihe ngosi nke ndi na emeputa taya tupu ha akwọ.Car tire kwuru kpọmkwem ibu ndeksi kwekọrọ na oke ibu eji n'ime!
2. Ezi nghazi nke ihu na azu bu nke kwesiri idobe ya
Ihu ihu maka ndụ taya ụgbọ ala abụghị obere, karịsịa njedebe nke ihu ihu ihu na ihu ihu ihu bụkwa isi ihe kpatara ya.N'ihu ụkwụ ihu nwekwara tumadi mee ngwangwa eyi n'etiti taya, n'ihu wheel ùkwù nwekwara mee ngwangwa eyi ke n'ime na n'èzí taya.Ya mere, ndị nwe nwere ike ijigide usoro ziri ezi nke ihu na azụ azụ na usoro ịkwọ ụgbọala!
3. tiregbọala ụgbọ ala okpomọkụ
Oge okpomọkụ dị oke elu, ụgbọ ala na-anya ụgbọ, na-ada mbà n'ihi ịgbatị na mkpakọ na esemokwu, na-ebute okpomọkụ dị elu.Highdị elu nke ukwuu nwere ike ime ka ike ọgwụgwụ daa ngwa ngwa, ọ nwekwara ike ịmị taya ahụ!
4. Ọnọdụ okporo ụzọ
Ọkwọ ụgbọala na-akwọ ụgbọala na mgbakwunye na ọgwụgwọ nke echiche, kamakwa iji gbochie nkọ nkume na metal nwere ike agbajikwa ma ọ bụ kpụchara akpụcha taya, chemical ikwafu bekee na ndị ọzọ n'elu ịnya ụgbọ ala, ma ọ bụrụ na ụgbọ ala ruo ogologo oge na gravel ụzọ ma ọ bụ karịa ọjọọ ụzọ ọnọdụ ịkwọ ụgbọala, ndụ nke taya ụgbọ ala ga-emekwa ka ụfọdụ belata!
5. Omume Ugboala
Ndị enyi ụgbọ ala enweghị ike ileghara anya.Bido ịmalite ọkụ ma ọ bụ ọnọdụ okporo ụzọ adịghị oke mma ọkwọ ụgbọ ala na ịdọba ụgbọala mgbe taya na-egbochi ihe mgbochi, ga-emekwa ka taya ụgbọ ala ahụ dịkwuo arọ, ma belata ndụ nke taya ụgbọ ala ahụ, n'otu oge ahụ, ga-ewetakwa ihe egwu maka onye ọ bụla ịkwọ ụgbọala
Previous: Car tire mmezi nkịtị uche, ị maara ihe ntị
Ọzọ: Gịnị bụ mkpọtụ nke taya ụgbọ ala? Kedu ka esi eme mkpọtụ nke taya?